Thu, Jul 2, 2020 at 9:41pm
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अमेरिकामा, सुरक्षा सहयोगका विषयमा छलफल
काठमाडौँ, ५ साउन । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अमेरिका पुगेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान संयुक्त राज्य अमेरिकाको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा वासिङ्गटन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री खान र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भोलि द्विपक्षीय सहयोग र आपसी हितका विषयमा विस्तृत छलफल हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री खानले अमेरिकी कंग्रेसका विशिष्ट नेताहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्नुका साथै अमेरिकामा बसोबास..
वासिङ्टन, ३ साउन । डेमोक्र्याटिक पार्टीको बर्चश्व रहेको अमेरिकी तल्लो सदन “हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स” ले संघीय न्यूनतम ज्याला सन् २०२५ सम्ममा प्रतिघण्टा १५ अमेरिकी डलर बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । तर रिपब्लीकन पार्टीको बर्चश्व रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले भने उक्त विधेयक पारित नगर्ने सम्भावना छ । तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था..
काबुल , ३ साउन अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित काबुल विश्वविद्यालयको दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वारमा शुक्रबार बम विस्फोट भएको छ । यसमा परी चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य आठ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय समयाअनुसार शुक्रबार बिहान ७ः१० मा उक्त विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहकोे परीक्षाका लागि विद्यार्थीको प्रवेश हुनेक्रममा विस्फोट भएको थियो । घाइते आठ जनामध्ये एक जना भने किशोरी..
टोकियो, २ साउन जापानको क्योटो शहरमा रहेको एक भवनमा रहेको एनिमेसन स्टुडियोमा बिहीबार गरिएको संदिग्ध आगजनीमा परी कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु हुनुको साथै अन्य दर्जनौँ घाइते भएका छन् । सो कम्पनीमा भएको भीषण आगआगी योजनाबद्ध रुपमा गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । यस आगजनीको कारण प्रष्ट भइनसकेकाे प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सो आगजनीको समयमा भवनमा कार्यरत धेरै व्यक्तिहरु भाग्न असफल भएकाले मृतकको सङ्ख्या..
अर्बपतिकाे सूचीबाट बिल गेट्सलाई उछिन्दै बर्नार्ड अर्नल्टले गरे दोस्रो स्थान कब्जा
एजेन्सी। अर्वपतिकाे सूचीबाट बिल गेट्सलाई उछिन्दै फेशन कम्पनी लुई विटोन 'एलभी'का मालिक बर्नार्ड अर्नल्टले दाेस्राे नम्बर कब्जा गरेका छन् । बर्नार्ड अर्नल्ट कुल सम्पत्ति १०७ दशमलव ६ बिलियन डलरका साथ अर्बपति सूचीको दोस्रो नम्बरमा परेका हुन् । ब्लूमबर्गको अर्बपतिको सूचीमा गएको सात वर्षको इतिहासमा बिल गेट्सले दुई नम्बरबाट तल झर्नुपरेको थिएन । तर माइक्रोसफ्ट कर्पका सहसंस्थापक बिल गेट्स सात वर्षको अवधिमा पहिलो पटक तेस्रो..
भ्रष्टाचारको आरोपमा फरार रहेका पेरूका पूर्वराष्ट्रपति अमेरिकामा पक्राउ
वासिङटन, १ साउन । पेरूका पूर्वराष्ट्रपति अलेक्जान्ड्रो टोलेडो संयुक्त राज्य अमेरिकामा पक्राउ परेका छन् ।भ्रष्टाचारको आरोपमा फरार रहेका टोलेडो संयुक्त राज्य अमेरिकामा मंगलबार बिहान पक्राउ परेको पेरूका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका हुन् । पेरूका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेरूको अनुरोधमा टोलेडो अमेरिकामा पक्राउ परेको जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ताले पूर्वराष्ट्रपति टोलेडोलाई स्वदेश फर्काउन अमेरिकी अधिकारीहरूसँग वार्ता भइरहेको बताएको छ । टोलेडो सन् २०१७ देखि संयुक्त राज्य..
वासिङ्टन, १ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार टर्कीलाई अमेरिकी अत्याधुनिक लडाकू बिमान एफ–३५ बिक्री नगरिने बताउनुभएको छ । टर्कीले रुसबाट अत्याधुनिक एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गरेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “हामीले लडाकू बिमान नबेच्ने जानकारी टर्कीलाई दिइसकेका छौं । हामी टर्कीलाई एफ–३५ लडाकू बिमान बेच्दैनौं ।” उहाँले टर्कीलाई अमेरिकी..
ट्रम्पको रंगभेदी ट्वीट ! अमेरिकी कंग्रेसद्वारा निन्दा प्रस्ताव पारित
वाशिङटन, १ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै चार जना विपक्षी महिला सांसदका विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अमेरिकी संसद कंग्रेसले मंगलबार निन्दा प्रस्ताव पास गरेको छ । प्रस्तावमा ट्रम्पको भनाइलाई नश्लवादी बताउँदै यस्तो भनाइले अमेरिकीमा भय र घृणालाई बैध गराउने ठहर गरिएको छ । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन द हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले चार महिला सांसदलाई लक्षित गरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा गरेको रंगभेदी..
सुरक्षाको माग गर्दै अष्ट्रेलियामा हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा
न्यु साउथ वेल्स, ३१ असार अष्ट्रेलियाको एक राज्यका करिब २२ हजार स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यका ती स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुले आफूहरुमाथि असुरक्षा बढेको कारण देखाएर यस्तो आन्दोलन गर्न लागेको समाचारमा जनाइएको छ । अस्पताल एवम् स्वास्थ्य केन्द्रहरुका कार्यस्थलमा सुरक्षाको अभाव रहेको कारण देखाउँदै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त राज्यका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुका मजदुर युनियनका करिब ५०० जना..
कम्युनिष्टले अमेरिका छाडे हुन्छ : डोनाल्ड ट्रम्प
वासिङटन, ३१ असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाजवादी र कम्युनिष्ट विचारधारा भएका व्यक्तिले अमेरिका छाड्नु पर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले सोमबार ट्वीटमा भनेका छन्,‘हामी कहिल्यै समाजवादी र कम्युनिष्ट राष्ट्र बन्दैनौं। यदी तिमीहरु यहाँ खुशी छैनौं भने देश छाड्न सक्छौं। यो तिम्रो स्वयंको इच्छा हो।’ आइतबार अमेरिकाको विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिकका महिला सांसदमाथि नश्लवादी टिप्पणी गरेर विवादमा परेको भोलिपल्टै ट्रम्पले अमेरिकाबाट समाजवादी र कम्युनिष्ट विचारधारा..
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धको असर, चीनको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशककै न्यून
बेइजिङ, ३० असार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशकमै पहिलोपटक सबैभन्दा न्यून दरमा वृद्धि भएको छ। चिनियाँ सरकारी विवरण अनुसार अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध तथा विश्वमै मागमा आएको मन्दीका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको हो ।चिनियाँ राष्ट्रिय तथ्याँक ब्यूरोका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.२ प्रतिशत देखिएको छ जबकी पहिलो चौमासिक अवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.४..
अमेरिकाको नियतविरुद्ध ‘विश्व जनमत’ जुटाउन भेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरोको पुत्र नेपालमा
काठमाडौँ, ३० असार । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेस्टोको नेतृत्वमा तीन मन्त्रीहरु सहित ११ सदस्य टोलीले नेपाल भित्रिए लगत्तै भेटघाट तीव्र पारेका छन् । तर अमेरिकासँग नेपाल निकट बन्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि उच्चअधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा उनीहरुसँग नभेट्ने निर्णय गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । अमेरिकाको नाकाबन्दी र नियतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा निकोस मादुरोको राष्ट्रपतिको दोस्रो सपथ ग्रहण..
अमेरिकासँग कुनै तहमा पनि वार्ताको प्रयास नभएको इरानको भनाई
तेहरान, २९ असार इरानी विदेश मन्त्रालयले तेहरान र वासिङ्टनबीच पछिल्लो विवादलाई लिएर वार्ता भएका भन्ने सन्दर्भलाई अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अव्वास मौसभीले भन्नुभयो, “स्लामिक गणतन्त्र इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीसँग इरान अमेरिका विवादलाई लिएर कुनै पनि तहमा सम्वाद चलेको छैन ।” कतिपय अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले रूसी पहलमा अमेरिकासँग इरानी अधिकारीको सम्वाद भएको भन्ने भनाईलाई उहाँले खण्डन गर्नुभएको हो । इरानसँग अमेरिकासहितका केही शक्ति..
इन्डोनेसियामा ७.३ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी छैन
जकार्ता, २९ असार । इन्डोनेसियाको पूर्वी मालुकु द्वीपलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आइतबार ७.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भूगर्भ केन्द्रका अनुसार भूकम्प निकै शक्तिशाली भए पनि सुनामीको चेतावनी दिइएको छैन । स्थानीय समय अनुसार अपराह्न ६.२८ बजे उत्तर मालुकु प्रान्तको टर्नेट नगरबाट करिब १६५ किलोमिटर टाढा भूकम्प गएकाले जनधनको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको इन्डोनेसियाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब..
अष्ट्रेलियामा शक्तिशाली भूकम्प, '१ मिनेटसम्म घरहरु हल्लिए'
सिड्नी, २९ असार । अष्ट्रेलियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा आइतबार बिहान शक्तिशाली भूकम्प आएको छ । हिन्द महासागरको १० किलोमिटर तल केन्द्रविन्दु रहेको उक्त भूकम्प ६.६ म्याग्नीच्युडको रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । भूकम्पले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव परेपनि घाइते तथा क्षतिको विवरण भने अहिलेसम्म नआएको उनीहरुको भनाई छ । अमेरिकी भूगर्भ मापन केन्द्रले भूकम्पपछिको आँधीको कुनै खतरा भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ब्रुम प्रहरी विभागले..
चालु आर्थिक बर्षको पूर्वार्ध चीनको वैदेशिक व्यापार १४६ खर्ब यूआन
बेइजिङ, २८ असार । चालू वर्षको पूर्वार्ध चीनको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित कूल १४६ खर्ब ७० अर्ब चिनियाँ युआन बराबर भएको चिनियाँ भन्सार विभाग (व्यूरो) ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३.९ प्रतिशतको वृद्धि हो । विश्व व्यापारमा पछिल्लो समय संरक्षणवाद चर्केर गएको र विश्वमा आर्थिक वृद्धि पनि मन्द भएको दवाव चिनियाँ अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेका..
आक्रमणका लागि तालिवान बालक प्रयोग गर्दै, विवाह समारोहमा भएको अक्रमणमा ९ जनाको मृत्यु
काबुल, २८ असार । आफगानिस्तानमा विवाह समारोह लक्षित आत्मघाती बम आक्रमण भएको छ। शुक्रबार भउको उक्त आक्रमणमा परी ९ जनाको मृत्यु भयो भने १२ जना घाइते भएका छन्। नान्गरहर प्रान्तस्थित पाचिरागम जिल्लामा विवाह समारोह जारी थियो। सो क्रममा एक बालक त्यहाँ देखा परेको, त्यसको केही क्षणमै बालकले बोकेको आत्मघाती बम विस्फोट भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। आक्रमणको जिम्मा आइएस समूहले लिएको छ। भारतस्थित समाचार..
खराब माैसमका कारण विमान हल्लिदा आकस्मिक अवतरण, ३७ जना घाइते
होनोलुलु, २७ असार । माैसमकाे खराबीका कारण विमान हल्लिएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएकाे छ । एअर क्यानाडाको विमान मौसममा खराबीका कारण अमेरिकाको हवाई राज्यस्थित होनोलुलुमा आकस्मिक अवतरण गरिँदा ३७ जना घाइते भएका हुन् । एयर क्यानाडाको ७७७–२०० विमान क्यानाडाको भ्यान्कुभरबाट सिड्नी जान लागेको थियो ।उक्त विमानमा २६९ जना यात्रु र १५ जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए । उडिरहेको विमान मौसमको खराबीका कारण हल्लिएको बताइएको..
वासिङ्टन, २६ असार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै आगामी सन् २०३० सम्ममा अमेरिकामा २५ प्रतिशतले मृगौला रोगीको संख्यामा कमी ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ । अमेरिकी सरकारले मृगौला प्रत्यारोपणमा नयाँ र सरल नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट कृत्रिम मृगौला प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति प्राप्त भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप प्रगति हुने अमेरिकी प्रशासनको विश्वास..
लण्डन, २५ असार इमेल काण्डका कारण विवादमा आएका अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत सर किम डरोकले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्दै उनले आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको इमेल गएको आइतबार सार्वजनिक भएपछि उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मूर्ख भनेका थिए । सो इमेल बेलायतकै पत्रिका डेली मेलले सार्वजनिक गरेको थियो । बेलायती राजदूतको इमेलमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई अयोग्य,..
अर्जेन्टिनाका पूर्व राष्ट्रपति फर्नान्डो डे ला रुअको निधन
ब्यूनस आयर्स, २५ असार अर्जेन्टिनाका पूर्व राष्ट्रपति फर्नान्डो डे ला रुअको मंगलबार मुटु तथा मृगौला रोगका कारण ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि उहाँलाई ब्यूनस आयर्सस्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रीले वरिष्ट राजनीतिक फर्नान्डोको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्व राष्ट्रपति फर्नान्डोको तीन वर्षअघि सन् २०१६ मा शल्यक्रिया गरिएको थियो । गत वर्ष..
इरानको तेल ट्यांकरमा कब्जा गर्ने दाउमा अमेरिका
काठमाडौं, २५ असार । अमेरिकाले इरानकाे तेल ट्यांकरहरूमा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा इरानको तेल ट्यांकरहरूमा साझेदारहरूमार्फत कब्जा गर्ने रणनीति अमेरिकाकाे छ। इरानलाई जल नाकाबन्दी गर्न पनि अमेरिका तम्सेको हाे । यो सबै उसले जलआवागमन स्वतन्त्रताको नाममा गर्न लागेको हो । अमेरिकाले ‘होर्मुज र बाब अल–मान्डेबको जलडमरुमा जलआवागमनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न’ गठबन्धन बनाउन खोजेको जोइन्ट चीफ्स अफ स्टाफ जोसेफ डनफोर्डले मंगलवार बताए । यो..
अन्तरीक्षको प्रतिष्पर्धामा भारत, चन्द्रमामा यान पठाउँदै
काठमाडौँ, २४ असार भारतले चन्द्रमामा यान पठाउने भएको छ । १४ जुलाई आइतबार उसले चन्द्रयानको रकेट प्रक्षेपण गर्ने भएको हो । चन्द्रयान १ पछि चन्द्रयान २ भारतको चन्द्रमा अन्वेषणमा महत्वाकांक्षी योजनामा पर्दछ । चन्द्रयान चन्द्रमाको सतहमा पुग्नेवित्तिकै भारत अमेरिका, रुस र चीनपछि चन्द्रमामा यान पुर्याउने चौंथो देश हुनेछ । भारतले चन्द्रयान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने योजना बनाएको छ । यो सफल भएमा..
अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन क्षेत्रमा अचानक बाढी, ह्वाइट हाउस जलमग्न
वाशिङटन, २४ असार । अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन क्षेत्रमा अचानक बाढी आएको छ । पानी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउसमा पनि पसेको जनाइएको छ । आपतकालीन स्थिति आइपरेपछि आवतजावत गरिरहेका यात्रुहरू जोखिममा परेका छन् । ठूलो वर्षाका कारण कतिपय ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएर चालकहरू फसेका छन् भने केही भूमिगत रेलमार्गमा खतरनाक डुबानको स्थिति देखा परेको बीबीसीले जनाएको छ । मौसमसम्बन्धी निकाय नेसनल वेदर सर्भिसले अचानक..
Results 1601: You are at page 19 of 54